के हाे स्तन क्यान्सर, कस्ता हुन्छन लक्षण, कसरी बच्ने स्तन क्यान्सर बाट ? - सुसूचित नेपालको चित्र: Onlinepana
के हाे स्तन क्यान्सर, कस्ता हुन्छन लक्षण, कसरी बच्ने स्तन क्यान्सर बाट ?
स्तन क्यान्सर आजको दिनमा आम रोग बनेको छ । स्तन क्यान्सरका कारण विश्वमा प्रत्येक वर्ष लाखौँ महिलाले ज्यान गुमाइरहेका छन् । आजभोलि कम उमेर समूहका महिलामा समेत स्तन क्यान्सर देखिने गरेको छ ।
१,स्तनमा लामो समयसम्म हल्का वा गम्भीर दुखाइ हुनु ।
२,स्तनमा गिर्खाहरु देखिनु ।
३, स्तन छुँदा दुख्नु ।
४, स्तन कडा हुनु, सुन्निनु ।
५ ,स्तनको तापक्रम बढ्नु, छुँदा तातो अनुभुति हुनु ।
६, बेचैनी र शरीर सुस्त हुनु ।
१,लसुन र प्याजको सेवनले स्तन क्यान्सरबाट बचाउँछ ।
२,अंगुर, किसमिस पनि स्तन क्यान्सरको निदानका लागि उपयोगी मानिन्छ ।
३,अदुवा, ग्रिन टीको सेवनले पनि स्तन क्यान्सरको जोखिम कम गर्छ ।
४,दुध वा दुधबाट बनेका परिकारहरु धेरै सेवन नगर्ने ।
५,स्तन क्यान्सरबाट पीडित महिलाले धुम्रपान गर्नु हुँदैन ।
६,चिया र कफिबाट टाढै रहनुस् ।
७,मास र मुसुरोको दाल नखानुहोस् ।
८,आफ्नो भोजनमा अण्डा र मासु समावेश नगर्नुहोस् ।
मंगलवार, फाल्गुण ११ २०७७१२:३४:३९